विवाह गर्दा के फाइदा, नगर्दा के फाइदा ? - Internet Khabar
December 30, 2017 January 6, 2019 Internet Khabar
बिवाहका शैली, मान्यता, संस्कार, प्रचलन भूगोल र समुदाय अनुसार भिन्न भिन्नै छ । यद्यपी दुई बिपपिरत लिंगी आपसमा बैवाहिक जीवनमा बाँधिन्छन् । जसको प्रचलन संसारभर छ । यो प्राकृतिक प्रकिया नै हो।
बिवाह किन त ? यसमा भने सबैको मत मिल्छ भन्ने छैन । कसैले विवाहलाई सृष्टीको अनिवार्यता मान्छन् त कसैले स्वेच्छिक विषय।
सिंगो जिन्दगीमा साथ दिने जीवनसाथी पाइन्छ। आफ्नै एउटा परिवारको रचना गर्न सकिन्छ, जसलाई हामीले अभिभावकत्व दिन सक्छौ। बिवाहपछि महिला र पुरुष दुवैले नयाँ नातेदारहरु पाउँछन् र त्यो नाताको बेग्लै रमाइलो हुन्छ।
यसरी खुल्यो, कर्णसँग द्रौपदीको प्रेम रहष्य
मैदाबाट बनेका परिकार नखाएकै राम्रो
यी कुरा घरमा राख्नुस्, आउनेछ सुखशान्ति
February 11, 2018 October 29, 2018
पति-पत्नीबीच झगडा भइरहन्छ ? यसो गर्नुहोस्
मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्युु , एक घाइते